Iyo yazvino beta vhezheni yeApple 15 inobvisa zvoga malenzi mumifananidzo | IPhone nhau
Iyo yazvino beta vhezheni yeApple 15 inobvisa zvega lens flares mumifananidzo
Karim Hmeidan | 04/08/2021 18:00 | Yakagadziridzwa ku 05/08/2021 08:27 | iOS 15
Smartphones ari kuchinja hupenyu hwedu, vakatoshanduka pachinzvimbo ... Uye ndezvekuti tinovashandisa pazvinhu zvese muzuva redu kusvika nhasi: kubasa, kutaurirana, kuzvivaraidza ... Uye makamera? Uchiri kutakura kamera yako here? Kunyangwe nyanzvi dzekutora mifananidzo vanobvuma kuti pane kanopfuura kamwe chiitiko vakashandisa iPhone ... Zviripachena kuti havana kukwana kamera, asi vanoita basa ravo panogadzirwa hunyanzvi. Rimwe rematambudziko akanyanya kupenya mwenje pamalenzi, chimwe chinhu chinogona kukanganisa mapikicha edu (kana kwete). Iye zvino yazvino beta vhezheni ye iOS 15 inogadzirisa kupenya uku munzira. Mushure mekusvetuka tinokupa rumwe ruzivo nezve shanduko iyi.
Uye zvinoita kunge zvinoitwa otomatiki. Lens flares, kana lens flare, zvakajairika zvema lenses efoni nekuda kwehunhu hwayo. Chiedza chinogona kutifadza pane imwe nguva, asi icho chiri chokwadi kusagadzikana kunogona kukuvadza mufananidzo wedu. Zvakanaka, ikozvino vashandisi vanoverengeka mukati Reddit irikureva kuti kugadzirisa kunoitwa neIOS 15 yemufananidzo kuri kuyedza kuvanza kupenya ukuuye dzimwe nguva anotovabvisa, zvinoenderana nekukosha kwemwenje. Uye zvinoita sekunge iyi nyowani iOS 15 ficha inoshanda kubva ku iPhone XR. Unoziva sei kuti pane kupenya uye kuti iOS 15 inoibvisa? nekuti muRarama Mufananidzo uripo, asi kwete mukugadzirisa.
Kudiki kuvandudzwa kunoitwa kuburikidza nesoftware, uye chokwadi ndechekuti iOS ndiyo imwe yemasisitimu akanakisa ekugadzirisa mafoto, iwe unotofanira kuyedza mamwe madhiraivhu kubva kumakwikwi. JJ Abrams (Akarasika, Star Trek) mukuru anoda maele flares ari kunze kwekutenga nezvose zvaro. Uye kwauri, Iwe unofungei nezve iyo iPhone foto yekugadzirisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Iyo yazvino beta vhezheni yeApple 15 inobvisa zvega lens flares mumifananidzo
Kutamisa WhatsApp zviziviso mumatauriro akachengetedzwa chaive chinhu chitsva
Google Mepu yakasviba modhi yava pamutemo